MB 2017 septambra - Fiangonan'Andriamanitra any Suisse eran-tany
Iza moa izahay? > Taratasy amin'ny mpiasa avy amin'i J. Tkach > MB 2017 Septambra
Friedrich Nietzsche (1844-1900) dia nanjary fantatra ho "atheist faramparany" noho ny fanakianana nanimba ny finoana kristiana. Nambarany fa ny soratra masina Kristiana, indrindra noho ny fanamafisany ny fitiavana, dia vokatry ny fahalovana, ny kolikoly ary ny valifaty. Raha tokony hanomboka handinika ny fisian'Andriamanitra ho azo atao akory izy dia nanambara tamin'ny filazany malaza ankehitriny hoe "maty Andriamanitra" fa maty ny hevitra lehibe momba Andriamanitra. Nikasa ny hisolo ny finoana kristiana nentim-paharazana (izay nantsoiny hoe ny finoana maty taloha) tamin'ny zava-baovao vaovao izy. Tamin'ny fandrenesana ny vaovao fa "maty Andriamanitra taloha", hoy izy, ireo filozofa sy fanahy afaka toa azy dia hazava amin'ny fiaingany vaovao. Ho an'i Nietzsche dia nisy fiaingana vaovao nankany amin'ny fiarahamonina "siansa faly", izay ahafahan'ny olona iray tsy mino ny famoretana mandroba ny fifalian'ny olona amin'ny fetra tery.
Ahoana no fomba ijoroantsika miaraka amin'ny tsy mino an'Andriamanitra?
Ny filozofian'i Nietzsche dia nanosika olona maro hanaiky ny tsy finoana anheisme. Na dia eo amin'ireo Kristiana aza dia misy ny sasany mandray ny fampianarany, mino fa manameloka ny endrika kristiana iray izay mody maty Andriamanitra. Ny tsy raharahian'izy ireo dia ny niheveran'i Nietzsche fa tsy misy dikany ny hevitr'andriamanitra ary nahita karazana finoana ho adala sy maharary. Ny filozofia dia manohitra ny Kristianisma ao amin'ny Baiboly, izay tsy midika hoe te-hametraka ny tenantsika ho ambony noho izy na ireo tsy mino an'Andriamanitra isika. Ny fiantsoana antsika dia ny fanampiana ny olona (ao anatin'izany ny tsy mino an'Andriamanitra) hahatakatra fa eo koa Andriamanitra ho azy ireo. Manatanteraka io antso io isika amin'ny alàlan'ny ohatra amin'ny mpiara-belona amintsika fomba fiaina iray izay mampiavaka ny fifandraisana feno fifaliana miaraka amin'Andriamanitra - na araka ny lazaintsika ao amin'ny WCG, amin'ny fiainana sy mizara ny vaovao tsara.
Mety efa nahita sticker iray ianao (toa ilay eo ankavanana) maneso an'i Nietzsche. Ny tsy raisina eto dia herintaona talohan'ny very ny sainy dia nanoratra tononkalo maromaro i Nietzsche izay nanondro fa nanova ny fahitany an Andriamanitra izy. Ity misy iray amin'izy ireo:
Tsia! Miverina amin'ny fampijaliana rehetra ataonao!
Ho an'ny farany ny olona mitokana rehetra. Miverina!
Ny ranomasoko rehetra dia mihazakazaka aminao!
Ary nirehitra ny foko farany Miparitaka aminao io!
Miverena miverina amin'Andriamanitro tsy fantatro! Ny maharary ahy! Ny vintana farany ho ahy!
Ny tsy fahazoana fahalalana an'Andriamanitra sy ny fiainana kristianina
Toa tsy misy farany ny fanehoana diso an’Andriamanitra izay mampirehitra foana ny afon’ny tsy finoana an’Andriamanitra. Aseho amin’ny fomba diso Andriamanitra fa mpamaly faty, manjakazaka, ary manasazy fa tsy ilay Andriamanitry ny fitiavana sy ny famindram-po ary ny rariny. Ilay Andriamanitra naneho ny tenany tao amin’i Kristy, izay manasa antsika hanaiky ny fiainam-pinoana Azy ka hiala amin’ny lalan’ny fiainana izay mitondra any amin’ny fahafatesana. Raha tokony hiaina fiainana voaheloka sy ampahorina, ny fiainana kristiana dia fandraisana anjara amim-pifaliana amin’ny fanompoan’i Jesosy mitohy, izay voasoratra ao amin’ny Baiboly fa tsy tonga hitsara izao tontolo izao izy fa hamonjy azy (Jao. 3,16-17). Mba hahatakarana tsara an’Andriamanitra sy ny fiainana kristianina, dia zava-dehibe ny mahafantatra ny maha samy hafa ny fitsaran’Andriamanitra sy ny fanamelohana. Andriamanitra dia tsy mitsara antsika noho izy manohitra antsika, fa noho izy momba antsika. Amin’ny alalan’ny fitsarany no nanondroany ny lalana mitondra any amin’ny fahafatesana mandrakizay – ireo no lalana mampiala antsika amin’ny fiombonana aminy, ka amin’ny alalan’ny fahasoavany no ahazoantsika fiadanana sy fitahiana. Satria Andriamanitra dia fitiavana, ny fitsarany dia mihatra amin’izay rehetra manohitra antsika malalany. Raha raisina ho toy ny fitsarana matetika ny fitsaran’olombelona, ​​ny fitsaran’Andriamanitra kosa dia mampiseho amintsika izay mitondra ho amin’ny fiainana sy izay mitarika ho amin’ny fahafatesana. Ny fitsarany dia manampy antsika hisoroka ny fanamelohana noho ny fahotana na ny ratsy. Nandefa ny Zanany ho amin’izao tontolo izao Andriamanitra mba handresy ny herin’ny ota sy hamonjy antsika amin’ny fanandevozana sy ny vokany ratsy indrindra, ny fahafatesana mandrakizay. Ny Andriamanitra Telo Izay Iray dia tian’Andriamanitra hahafantarantsika ny hany fahafahana marina: Jesosy Kristy, ilay fahamarinana velona izay manafaka antsika. Mifanohitra amin’ny hevi-diso nataon’i Nietzsche, ny fiainana kristiana dia tsy eo ambanin’ny faneren’ny valifaty. Fa kosa, fiainana mahafaly ao amin’i Kristy sy miaraka amin’ny Fanahy Masina izany. Anisan’izany ny fandraisantsika anjara amin’izay ataon’i Jesosy. Amiko manokana dia tiako ny fanazavana azon'ny sasany amin'ny sehatry ny fanatanjahantena hoe: tsy fanatanjahantena mpijery ny kristianisma. Indrisy anefa fa na izany aza dia diso hevitra ny olona sasany ka nahatonga ny hafa hanao zavatra ho an'ny famonjena azy. Misy fahasamihafana lehibe eo amin’ny fanaovan-tsoa ho amin’ny famonjena (izay manindry antsika) sy ny fandraisantsika anjara amin’ny asan’i Jesosy, izay famonjena antsika (izay manindry azy).
Mety efa nandre ilay andian-teny hoe "ateista kristiana" ianao taloha. Ampiasaina ho an'ny olona izay milaza ho mino an 'Andriamanitra nefa tsy mahalala firy momba azy ary miaina toy ny tsy misy izy. Ny mpino tso-po dia afaka ny ho tonga tsy mino an’Andriamanitra rehefa miala tsy ho mpanara-dia an’i Jesosy. Ny olona iray mety ho variana tanteraka amin'ny hetsika (na dia ireo manana marika kristiana aza) ka lasa mpanara-dia an'i Jesosy tapa-potoana - mifantoka bebe kokoa amin'ny asa noho i Kristy. Avy eo dia misy ireo mino fa tia azy ireo Andriamanitra ary manana fifandraisana aminy fa tsy mila mandray anjara amin'ny fiainam-piangonana. Raha mifikitra amin'izany fomba fijery izany izy ireo dia (angamba tsy nahy) mandà ny maha-mpikambana azy ireo sy ny maha mpikambana azy ao amin'ny tenan'i Kristy. Na eo aza izany, na dia miantehitra amin'Andriamanitra aza izy ireo indraindray, dia tsy tian'izy ireo hofeheziny tanteraka amin'ny fiainany. Tian'izy ireo ho mpiara-miasa aminy Andriamanitra. Ny sasany dia aleony Andriamanitra ho mpanampy amin'ny sidina, ka mitondra zavatra angatahina isaky ny mandeha. Andriamanitra no mpanamory antsika - omeny antsika ny lalana hitarika antsika amin'ny tena fiainana. Izy tokoa no làlana sy fahamarinana ary fiainana.
Mandraisa anjara amin'Andriamanitra ao amin'ny fiarahamonina
Niantso ny mpino Andriamanitra mba hitarika zanakalahy sy zanakavavy maro ho any amin’ny voninahitra (Heb. 2,10). Manasa antsika Izy mba handray anjara amin’ny asa nanirahana azy ho an’izao tontolo izao amin’ny alalan’ny fiainana sy fizarana ny filazantsara. Miara-manao izany isika amin’ny maha-mpikambana ao amin’ny tenan’i Kristy, dia ny Fiangonana (“Ny fanompoana dia fanatanjahantena ekipa!”). Tsy misy manana ny fanomezam-pahasoavana rehetra, noho izany dia ilaina avokoa izy rehetra. Ao anatin’ny fiombonana ao amin’ny fiangonana dia mifanome sy mandray isika – mifanorina sy mifampahery. Tsy mandao ny fiangonantsika isika, araka ny fampirisihan’ny mpanoratra ny Hebreo. ( Heb. 10,25) fa miaraha manao ny asa izay niantsoan’Andriamanitra antsika ho fikambanan’ny mpino.
Ankafizo ny fiainana tena mandrakizay miaraka amin'i Kristy
Jesosy, ilay Zanak’Andriamanitra tonga nofo, dia nanao sorona ny ainy mba hananantsika “fiainana mandrakizay sy fahafaham-po tanteraka” (Jao. 10,9-11). Tsy fiainana misy harena azo antoka na fahasalamana tsara izany. Tsy mandeha foana tsy misy fanaintainana. Miaina ao anatin’ny fahatokiana kosa isika fa Andriamanitra dia tia antsika sy namela antsika ary nandray antsika ho zanany natsangany. Raha tokony ho fiainana feno fanerena sy henjana, dia feno fanantenana, fifaliana ary fahatokiana. Fiainana izay handrosoantsika ho tonga izay napetrak’Andriamanitra ho antsika mpanara-dia an’i Jesoa Kristy amin’ny alalan’ny Fanahy Masina. Andriamanitra, izay nitsara ny ratsy, dia nanameloka izany teo amin’ny hazo fijalian’i Kristy. Noho izany dia tsy misy ho avy ny ratsy ary ny lasa dia nomena lalana vaovao izay ahafahantsika mandray anjara amin'ny finoana. Tsy navelan’Andriamanitra hitranga izay tsy azony ampihavanina. Eny tokoa, “fafafana ny ranomaso rehetra” satria Andriamanitra ao amin’i Kristy sy amin’ny alalan’ny Fanahy Masina no “havaozina” (Apokalypsy 2.1,4-5). Izany, ry namana sy mpiara-miasa, no tena vaovao tsara! Voalaza ao fa na dia kivy aza ianao dia tsy kivy na iza na iza Andriamanitra. Hoy ny apostoly Jaona: “Andriamanitra dia fitiavana.” (1 Jao 4,8) - ny fitiavana no toetrany. Tsy mitsahatra ny mitia antsika Andriamanitra satria raha manao izany Izy dia mifanohitra amin’ny toetrany. Noho izany, dia afaka mampahery antsika ny fahalalana fa ny fitiavan’Andriamanitra dia ahitana ny olona rehetra, na efa niaina izany na mbola ho velona. Izany koa dia mihatra amin'i Friedrich Nietzsche sy ireo tsy mino an'Andriamanitra rehetra. Afaka manantena isika fa nahatratra an’i Nietzsche koa ny fitiavan’Andriamanitra, izay niaina fibebahana sy finoana, izay tian’Andriamanitra homena ny olona rehetra fotoana fohy talohan’ny nahafatesany. Eny tokoa, “izay rehetra miantso ny anaran’i Jehovah no hovonjena” (Rom. 10,13). Tena mahafinaritra fa tsy mitsahatra ny fitiavan’Andriamanitra antsika.